ब्लु बुक नबिकरण गर्न कती लाग्छ - Arthik Sansar :: Nepal's Leading Economic News portal. – Arthik Sansar
३० चैत्र २०७८, बुधबार १०:०७
Homeअटाे बजारब्लु बुक नबिकरण गर्न कती लाग्छ
प्रत्येक वर्ष सवारी साधनको दर्ताको प्रमाणपत्र (ब्लू बुक) नविकरण गर्नु पर्छ । ब्लूबुक नविकरण गर्नको लागि चालु आर्थिक वर्ष सम्मको कर तिरेको (हेर्नुहोस्ः आ.ब. २०७६।७७ का लागि तोकिएको सवारी कर तथा अन्य दस्तुरहरु) र (कम्तिमा तेश्रोपक्ष) बीमा गरेको हुनै पर्छ ।
कहिले सम्मको कर तिरिएको छ भन्ने कुरा ब्लू बुकमा जनाएको अभिलेख हेरेर थाहा हुन्छ । ब्लूबुकमा आर्थिक वर्ष, रसिद नम्बर, रकम र कर तिरेको मिति लेखी कर तिरेको अभिलेख जनाईदिएको हुन्छ हेर्न सकिन्छ ।
यदि त्यस्तो अभिलेख जनाएको भेटिएन भने‍ पनि कार्यालयमा गई आफ्नो सवारी साधनको करप्रिन्ट माग्‍न सकिन्छ । कर प्रिन्टमा कुन मितिमा कुन रसिद नम्बरमा कति रकम तिरेको भन्ने विवरण देख्न सकिन्छ ।
ब्लूबुकको “प्रमाण-पत्र नविकरण” भन्ने पानामा नविकरण गरेको मिति र नविकरण कायम रहने म्याद लेखिएको हुन्छ । लेखिएको म्याद नाघेको ३ महिनाभित्र प्रमाणपत्र नविकरण गराइसक्नु पर्छ ।
उदाहरणको लागि ब्लूबुक मिति २०७७।३।३ गते नविकरण गरिएको थियो भने उक्त नविकरणको अवधि २०७७।९।१० गते सम्मको लागि दिइएको थियो । यस बमोजिम २०७७।९।१० गते पछि ३ महिना अवधि गणना गर्दा २०७७।१२।१० गते भित्र सो ब्लूबुक नविकरण गराइसक्नु पर्छ ।
चार आर्थिक वर्ष सम्मको लागि रु.८००।–
र पाँच आर्थिक वर्ष सम्मको लागि रु.१०००।–
पाँच आर्थिक वर्ष समेत नाघिसकेको हो भने अब त्यस्तो सवारी साधनको दर्ता खारेज हुन्छ । दर्ता खारेज भएको सवारी साधन पुनः दर्ता नगरी नविकरण गराउन मिल्दैन ।
यसरी गर्नुस् करको जरिवाना गणनाः
प्रदेश आर्थिक ऐन २०७६ को अनुसूची २ को क्रम संख्या ९ बमोजिम “जुनसुकै सवारी साधनका धनीले चाहेमा लाग्‍ने सवारी साधन कर प्रचलित दरका आधारमा एकमुष्ट रुपमा पाँच वर्षसम्मका लागि एकैपटक भुक्तानी गरी नवीकरण गराउन सक्नेछन् । यसरी अग्रिम रुपमा पाँच वर्षको सवारी साधन कर एकमुष्ट बुझाई नवीकरण गराएमा लाग्‍ने सवारी साधन करमा दस प्रतिशत छुट हुनेछ ।” भन्ने व्यवस्था छ ।
आफ्ना केही जिग्यासा भए कमेन्ट गर्नुस्
Previous articleभारतमा पुनः बढ्न थाले कोरोना संक्रमित
Next articleमाध्यामिक तहको अध्यापन लाइसेन्सका लागि विज्ञापन खुल्यो